Uyilo lwegraphic yesitayile saseScandinavia: fumana ukhuthazo kwiiprojekthi zakho ezilandelayo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ilogo yeFinnish brand Tapped Birch Water
"Okungaphantsi kuninzi" Njengokuba eli binzana livakala kuthi, yeyona nkcazo ilungileyo sinokuyinika Uyilo lwesitayile saseScandinavia. Xa sithetha ngolu hlobo, imifanekiso yefenitshala esebenzayo kunye elula, okanye eluncedo kunye nezinto ezintle zokuhlobisa, mhlawumbi ziza engqondweni. Kwaye kukuba i-IKEA yamazwe aphesheya eSweden ibongamele ukwenza i-Nordic aesthetics yaziwa kwihlabathi liphela.
Nangona uninzi lwabantu lusazi esi sitayile kuyilo lwangaphakathi, inyani kukuba iyasebenza nakwilizwe loyilo lwegraphic, kwaye kule minyaka idlulileyo inefuthe kubuhle beempawu ezibonakalayo ezithandwayo. Phawulwe ukuphefumlelwa kwizinto zendalo, ubuncinci kunye nokulula, zezinye zezona mpawu zibalulekileyo zale ndlela uyikhangelayo Yenza iziqwenga eziluncedo kakhulu zithathwe kwimbonakalo yazo encinci okanye kwindawo, ukuba zona zintle ngobuhle.
Isitshixo solu luyilo kukuba lungisa ifom ukuze isebenze yeqhekeza hayi enye indlela ejikelezileyo. Kodwa ukuba ufuna ukwamkela isitayile seScandinavia kuyilo lwakho lobuhle, kukho imigaqo-siseko ekufuneka uyazi.
3 Imigca elula kunye neemilo
4 I-Sans Serif typography
5 Ukuphefumlelwa kwendalo
6 Iphalethi yombala
8 Ukusetyenziswa kokukhanya
9 Imisebenzi yezandla
Ukulula kuyilo lweScandinavia kuguqulela kwi- sukubeka nayiphi na into engeyomfuneko Okanye ulayishe ngemifanekiso ecacileyo okanye imibala eqinile. Kuya kufuneka wenze ifayile ye- isiqwenga somzobo sintsokothe ​​kangangoko kunokwenzeka, Unamalungelo afanelekileyo kunye ayimfuneko ukuhambisa umyalezo obonakalayo owufunayo.
Uyilo lwasekhaya lweScandinavia yoyilo lophawu lwentengiso
Nangona zihlala zithathwa ngento enye, Ubuncinci abuhambelani nokulula, kodwa iya kuvela njengesiphumo sayo.
Ezo zinto ziyimfuneko ozibeke kuyilo lwakho, kuya kufuneka uzise kubuncinane bembonakalo. Tsiba naziphi na iinkcukacha ezingadibaniyo Kwaye ulibale malunga nezinto zokuhombisa ezinokubathwala ngokubonakalayo. Umbono kukuba uyakholelwa Ubuncinane bemizobo iyahambelana kakhulu, yomelele kwaye iyabonakala ngokulula kwinqanaba lokubonwayo.
Ilogo yeZiko leMozulu laseNorway
Imigca elula kunye neemilo
Iziphumo ezisetyenzisiweyo zalemigaqo mibini yangaphambili kukuba uyilo lwethu luya kuba nalo imigca elula kakhulu, kunye nemilo ethe tyaba kwaye elula, onokuthi ukhethe ukubeka kuyo izithuba ezibanzi zemvelaphi emhlophe okanye imvelaphi engabonakaliyo Ngale ndlela, ukugxila ekubonakalayo kuya kujoliswa kula manani.
Uphawu lwentengiso elishumi elinanye lusebenzisa imigca kuphela
I-Sans Serif typography
Ukuba besithetha ngokulula kunye nokunciphisa izinto kuyilo lwethu, sebenzisa uhlobo lwe-sans serif typeface lukhetho ekufuneka silwenzile ngokungagqibekanga. Olu hlobo lochwethezi sele lusususile eso sihombiso "songezelelekileyo", sibizwa ngokuba yiSerif, ehlala ibekwa emaphethelweni abalinganiswa.
Sebenzisa uhlobo lweSans Serif typeface uya vumela indawo ethe kratya phakathi komlinganiswa ngamnye, Yintoni eya kwenza umohluko kwinqanaba lokubonwayo kuyilo. Ngenxa yoko, isiqwenga sethu somzobo siza kuba nefayile ye- ukujonga okwangoku, zilula, ngqo kwaye ifikeleleka kakhulu eluntwini.
Zonke Ubuhle besitayile seScandinavia buchaphazeleke ngamandla kwindalo. Mhlawumbi kungenxa yendlela yokuphila ekhuthazwa ziiNordics, apho zingaphandle kwaye zichitha ixesha elisemgangathweni ekunxibelelaneni nendalo, zidlala indima ebaluleke kakhulu kwinkcubeko nakwindlela yazo yokonwabela ubomi.
Ke isitayile seNordic sisebenzisa izinto zendalo, unako Faka ii-silhouettes zemithi, amagqabi, iintyatyambo, iintaba, izilwanyana, njl. okanye ungasebenzisa iinkuni, umkhenkce okanye iimarble njengemvelaphi.
Iiglasi zohlobo lweBirch zamanzi ezipeyintiweyo ziphefumlelwe ngeziqu zemithi
Uyilo lwakho khetha lube lunye Umbala wepalethi okhanyayo olunge kwaye uhambelana emehlweni.
Ukuba ufuna uyilo oludlamkileyo, olulula nolucocekileyo lweScandinavia, sebenzisa imibala yegrey, brown, beige okanye pastel imibala. Ukuba ufuna ukunika ezo thowuni ukubamba okumangalisayo ngelixa ugcina ii-aesthetics ezifanayo, unokukhetha iithowuni zokhrimu, imibala yeterracotta okanye ukubamba kwegolide okutsala umdla wamehlo.
Kwimeko apho ufuna ukuphuma kancinane kwiskripthi kwaye usebenzise imibala eyomeleleyo kunye necacileyo, thelekisa imibala engathathi hlangothi ukuze ungalahlekani nesimbo. Umzekelo, ungadibanisa umbala ongwevu nombala o-orenji oqaqambileyo.
Imibala yepeyinti yinto edla ngokusetyenziswa kuyilo lweScandinavia
Isibonelelo esaziwayo esaziwayo kwisitayile seScandinavia ziipatheni, Ke ukuba ujonga into enamathela kwisitayile kodwa enesigqi esincinci, ungazama ipateni.
Iipateni zemveli zaseScandinavia zisebenzisa amanani acabalele nalula, zihlala zineentyatyambo, ijiyometri okanye umxholo wesilwanyana, oya kuhlala uhlala uhamba zilungelelaniswe ngendlela efanayo.
Kwaye ukuba ngempazamo ufuna esinye isalathiso, iijezi eziqhelekileyo zeKrisimesi ezinithiwe iipateni zamaqhekeza ekhephu bakwayiScandinavia kuyilo.
Umzekelo weKrisimesi waseScandinavia
Into ephathwa kakuhle kwisitayile saseScandinavia kukusetyenziswa kokukhanya, ke unako beka indawo kuyilo lwakho oluqaqambisa ezona zinto zibalulekileyo.
Ekugqibeleni, ubuchule bezandla kunye nokwenza ubugcisa kunye nobugcisa kwinkcubeko yaseScandinavia Baye baqala esi sitayile. Ke ngoko, ukuba ucinga ukuba unale talente, sebenzisa iifonti zakho, uzobe eyakho imizobo okanye uyile iipateni zakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Uyilo lwegraphic yesitayile seScandinavia: fumana ukhuthazo kwiiprojekthi zakho ezilandelayo